3 Popular Apps si hagaagsan iPhone Xiriir
1. nidaameed iPhone
Waxaa jira siyaabo badan tahay in aad u hagaagsan xiriirada iPhone. Waxaad u hagaagsan karaa iPhone xiriir la iCloud, Outlook, Google, Yahoo !, Facebook, Thunderbird iyo in ka badan. Inta aad ku leedahay xisaabta kasta oo iyaga ka mid ah, waxaad si fudud u hagaagsan kartaa xiriirro si iPhone. Si kastaba ha ahaatee, waa sida kaliya ee lagu sameyn iPhone xiriir hagaagsan ma aha. Waxaad kaloo isticmaali kartaa barnaamijyadooda qaar ka mid ah si ay u hagaagsan iPhone xiriir la Google, Mac buug cinwaanka iyo Computer Outlook. In this article, waxaan doonayaa inaan idin tusin barnaamijyadooda 3 iPhone sare si hagaagsan xiriirada on iPhone. Fadlan ka eegi kartaa barnaamijyadooda ka. Taasi waxaa laga yaabaa in waxa aad rabto.
1. Xiriirada NQ nidaameed 4.5 Free 4.5 / 5 macruufka 4.3 ama ka dib
2. Contact fidmad & Account nidaameed 3.3milyan $3.99 4.5 / 5 macruufka 4.3 ama ka dib
3. Google Xiriirada nidaameed 2.2m $2.99 3.5 / 5 macruufka 3.0 ama ka dib
1. Xiriirada NQ nidaameed (By NQ Mobile Inc.)
NQ Xiriirada nidaameed syncs xiriirada iPhone in hab fudud. Waxay bixisaa gurmad xiriir ah oo xal u celinta marka aad leedahay qalabka macruufka badan. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si fudud u gurmad iyo dib u soo ceshano xiriirada iyo fariimaha aad iPhone iyo wixii kale ee telefoonada mobile socda ee hawlgalka kala duwan
Baro wax badan oo ku saabsan NQ Xiriirada nidaameed >>
2. Contact fidmad & Account nidaameed (By xilbaa Apps)
Contact fidmad & Account nidaameed kuu ogolaanaya in aad si fudud oo dhaqso u hagaagsan xiriirada ka iPhone in iPad la xisaab-xidhiidh, iyo qeybsanaan. App Tani waxaa loo isticmaali karaa in tiro ka mid ah habab hal abuur leh. Tusaale ahaan, waxaad ku milmaan kartaa xiriirada Exchange shirkadaha galay buugga cinwaanka deegaanka shakhsi ama qeybsanaan. Ama laga yaabaa in aad rabto in aad u hagaagsan aad xiriirada Yahoo.
Badan oo ku saabsan Baro Xiriirada fidmad & Account nidaameed >>
3. Google Xiriirada nidaameed
Sida ay magaceeda soo jeedisay, Google Xiriirada nidaameed waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu hagaagsan xidhiidhka ka dhexeeya iPhone iyo xisaabta Gmail. Waa $2.99 oo kaliya oo ay leedahay 2.2 MB size. Interface waa mid aad u kooban oo fudud. Just gasho aad Gmail xisaabta iyo qasabadda ku milmaan. Markaas, doortaan xiriirada u hagaagsan ka iPhone in Gmail ama nidaameed Gmail xiriirada si iPhone.
Baro wax badan oo ku saabsan Google Xiriirada nidaameed >>
4 Siyaabaha Xiriirada kaabta on iPhone
3 Siyaabaha Messages iPhone kaabta
Dhaqaaq Photo Library ka iPhone in PC
2 Siyaabaha Bedelka MP3 in iPhone
4 Siyaabaha kaabta iPhone Camera Roll
3 Siyaabaha Copy Music ka CD si iPhone
3 Siyaabaha Bedelka Notes ka iPhone
4 Siyaabaha Copy iPhone Camera Roll si iPhone
A Guide Full si ay u gudbiyaan iPhone in iPad
Top 10 Apps la Sameeyo Transfer File iPhone wirelessly
> Resource > iPhone > 3 Apps si hagaagsan iPhone Xiriir